Walaaca naafada ee horyaalka Ingiriiska - BBC Somali
Walaaca naafada ee horyaalka Ingiriiska
Image caption Garoonka Liberty Stadium ee kooxda Swansea ayaa caan ku ah gooha lagu isticmaalikaro kuraasta dadka lixaadkoodu kala dhiman yahay.
Qolyaha u dooda dadka lixaadkoodu kala dhimanyahay ayaa sheegay in saddex meeloodow meel kooxaha ka dheela horyaalka Ingiriisku ay ku guul daraysanayaan in wakhtigii ay qabsadeen ay ku dhaqan galiyaan samaynta tasiilaad ay si sahlan u adeegsadaan taageerayaasha lixaadkoodu kala dhiman yahay.
Sanadkii hore Horyaalku wuxuu balan qaaday in uu wax ka qaban doono tasiilaadka dadka lixaadkoodu dhiman yahay u sahlaya in ay garoomada tagaan oo ay ciyaaraha daawadaan. Horyaalku wuxuu ku adkaystay in ay dhaqan galin doonaan qawaaniinta rasmiga ah meesha lagu gaaro bisha sideedaad ee sanadka 2017ka.
Arrintaas ayaa dabo socotay baaritaan ay BBC-du samaysay 2014-kii oo lagu ogaaday in 17 ka mid ah 20-ka kooxood ee horyaalka Ingiriiska ka dheela in aysan lahayn goobo ku filan kuraasta ay isticmaalan dadka curyaamada ah.
Joyce Cook oo ah gudoomiyaha hay'ad gargaar oo ka shaqaysa arrimaha taageerayasha ciyaaraha ee lixaad koodu kala dhiman yahay ayaa arrintaas laga gaabiyay ku tilmaamay "wax aan la aqbali Karin"
Wuxuu intaas ku daray "in kooxuhu ay iyagu qabsadeen wakhtiga ay ku sameeyaan jawi dadka naafadda ah u ogolaanaya in ay ciyaaraha daawadaan iyaga oo aan wax dhibaato ah kala kulmin".
Cook wuxuu sheegay in ay u muuqato in qaar badan oo kooxaha ka mid ah aysan ka soo baxaynin balanqaadkii ay horay u sameeyeen.